War deg deg: Ciidamo Kasocda AMISOM oo soo gaaray halka ay ku yaalaan baalayaasha Miinooyinka lagu rakibay.
Ciidamo ka socda ururka Midawga Afrika ayaa waxa ay gaareen agagaarka Hoteel Wehliye ilaa Dabka halkaasi oo ay ku yaallan baalooyin dhowr ah oo ay qaraxyo ku xiranyihiin si ay xaalada ka taagan halkaasi usoo afmeeraan.
Ciidamadaan ayaa la filayaa in qarxiyaan miinooyinka iyaga oo bad-baadinaya baalayaasha arintaas oo aan la’ogeyn sida ay ku hir-geli karto.
Dadka deegaanka oo ilaa subaxnimadii hore ee saaka jaha wareersanaa wixii ka danbeeyay qaraxii baalaha 29-aad ayaa waxa ay kawar sugayaan sida ay AMISOM usoo afmeraan arinta iyaga oo qaarkood kasoo eegaya dabaqyada sida xaalku ku danbeyn doonana halkaasi ka dersaya.
Gen. Meleteri oo ku qarxiyay dowlada Soomaaliya kuna sheegay mid gashay heshiis lagalo kii ugu xumaa taariikhda.
Gen. Maxamed Nuur Galaal oo wareysi siiyaay BBC-da laanta afka Soomaaliga ayaa waxa uu ku qarxiyay dowlada Soomaaliya oo uu ku tilmaamay mid gashay heshiis dhibaata dalka ku ah maadaama ay Shirkad u xil-saartay ilaalinta xeebaha dalka Soomaaliya.
“Xeebaha Soomaaliya ma ilaali karto Shirkad. Ciidamada baddu waxa ay lahaayeen lix saldhig mana buuxi karto shirkadaani. Dalka waxaa xeebihiisa ilaali kara dowlad awood leh oo Soomaaliya Caawimaad buuxda siisa. Dowladu go’aanka ay qaadatay waa mid qaldan”, Galaal ayaa dowlada ku eedeeyay.
Waxa uu intaa sii raaciyay, “Diyaarado, Maraakiib, Raadeero iyo qalab casri ah arintaasi shirkad ma fulin karto arintaasi waa xaqiiqo. Dowladu maxey heshiis ula geli weysay dowladaha waaweyn ee taageera. Waxaa wax jira ah in aan la dooneyn in dalku nabad helo. Hadii Soomaaliya Horumar lala doonayo maxaa loogu ogolaa waayay in dowlad awood leh ay kaalmeyso dowlada Soomaaliya?”.
Wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa waxa uu maalin ka hor heshiis la saxiixsay shirkad laga leeyahay dalka Holand taas oo ilaalin doonta xeebaha dalka Soomaaliya iyada oo lagu wado sida heshiiska ku xusan in wax badan ka qabtaan arinta cakiran ee badaha Soomaaliya.
War deg deg ah: Qaraxyo sil-silada ah oo ka dhacay Muqdisho iyo bar-tilmaamedkooda oo layaab lahaa.
Laba qarax oo lala eegtay Baalayaalka nuuca cadceeda kushaqeeya ah ayaa waxa ay siyaaba kala duwan uga dheceen magalaada Muqdisho gaar ahaan wadada Maka Al-mukara.
Qaraxyadaan ayaa kan hore waxa uu ka dhacay agagaarka Isgosya Shaqaalaha halka kan kalana uu dha dhacay agagaarka Hotel Wehliye ee magaalada iyada oo qaraxa hore uu ku dhaawacmay ruux rayid ah halka qaraxa kale wali aan la ogeyn qasaaraha uu dhaliyay.
Turkiga oo Reer Galbeedka ku Eedeeyay weerarkii Al-shabaab ku fulisay safaaradooda in ay ku lug lahaayeen.
Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Turkiga Cemil Çiçek ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday safaaradooda magaalada Muqdisho isagoo booqday qaar kamid ah dhaawacyadii laga keenay magaalada Muqdisho oo lagu daawaynayo isbitaal ku yaalla magaalada caasimada ah ee Ankara.
Çiçek ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday safaarada uu muujinayo in hawlaha bini’aadanimo ee Turkigu ka wado Soomaaliya inay khalkhal galisay awoodo aanu magacaabin.
“Waan fahansannahay inaan qolo kale lugaha kaga joogsanay, sababtoo ah Turkigu waxay saamayn muuqata ku sii yeelanayaan gobolkaas maalinba maalinta ka sii dambaysa.Turkigu waxay isku dayayaan inay kor u soo qoodaan heerka nololeed ee dadka, annagoo isticmaalayna mashaariicda bini’aadannimo iyo siyaabo kaleba” ayuu yidhi Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Turkiga oo muujiyay inay tuhunsanyihiin awoodo kale oo tartan iyaga kula jira.
Waxaanu gudoomiyaha baarlamaanku carrabka ku dhuftay in kooxda Alshabaab oo weerarkan fulisay in la isticmaalay ee ay jiraan quwado ka dambeeya.
“Turkigu waxay sameeyeen wixii looga baahnaa waddan saaxiib la ah Soomaaliya, waxaanan ognahay inay jiraan quwado aan ku faraxsanayn xarumaha iyo dadaallada aan ka wadno gobolka. Nasiib darrase waxay noo soo isticmaaleen ururada argagixisada markale si ay u hor-istaagaan mashaariicda uu Turkigu ka furay Afrika” ayuu sii raaciyay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Turkiga.
Hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa muujinaya inay dawlada Turkigu ay tuhunsatahay quwado tartan kula jira inay ka dambeeyeen weerarkii labo maalmood ka hor lagu qaaday safaaradooda oo lagaga dilay hal askari saddex kalana lagaga dhaawacay, inkastoo weerarkaasi ay sheegatay Alshabaab oo iyadu xubin ka ah urur waynaha Al-qaacida.
Dhinaca kale Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay inaan waxba laga bedelayn siyaasaddooda Gar-gaarka ah ee ku wajahan Soomaaliya, kaddib weerarkii toddobaadkan lagu qaaday xarun ay ku leeyihiin Muqdisho.
Davutoglu ayaa hadalkan sheegay isagoo booqanayay dhaawacyadii askarta Turkiga ee ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho oo lagu daweynayo Cisbitaal ku yaalla xarunta dalkaas ee Ankara, isagoo hoosta ka xariiqay in Somalia ay fuliyeen labadii sano ee lasoo dhaafay barnaamijyo ay ku caawiyeen shacabka Soomaaliyeed.
“Turkigu wuxuu ka fuliyay Soomaaliya gargaar bani’aadamnimo oo ay ku kacday 200-milyan oo doollarka Mareykanka ah, taasoo ay fuliyeen qaar ka mid ah hay’adaha samafalka Turkiga,” ayuu yidhi Davutoglu. Isagoo intaas ku daray “Haddii xaaladda nololeed ee Somalia ay maanta dib u soo laabato, waxaa sii socon doonta dadaallada dhinaca siyaasadda ah ee Turkiga ay ka wadaan Soomaaliya.”
Sidoo kale, wasiirku wuxuu sheegay in Turkigu aanu wax dan ah ka lahayn Kaalmaynta Soomaaliya, balse ay qayb ka tahay siyaasadda Turkiga ee xilligan ku wajahan qaaradda Afrika.
Wuxuu tacsi u diray ehellada askarigii ku dhintay weerarkii Muqdisho, halka kuwa dhaawacmayna uu u rajeeyay caafimaad deg-deg ah, isagoo xusay in weerarkaas uu ahaa mid argagaxiso oo aan laga gaadhin hadafkii laga lahaa.
Kenya iyo Al-shabaab oo galay Heshiis Qarsoodi ah kaas oo hormuud u noqday in lasii daayo laheestayaal Kiinyaan ah.
Xarakada Al-Shabaab ayaa la sheegay iney sii daysay laba Saraakiil Kenyan oo 11-kii bishii Janaayo ee sanadkan ay ka soo afduubteen degaano ka tirsan gobolka waqooyi Bari Kenya sida ay faafisay wakaalada wararka ee AFP.
Sii deynta saraakiishan ayaa ka dambeysay ka dib wadahadalo iyo dedaalo ay bulshada degaanada woqooyi Bari Kenya u galeen sii daynta labadaasi sarkaal ayna wada xaajood la galeen Al-Shabaab.
Saraakiishan oo lagu kala magacaabo Edward Yesse Mule iyo Fredrick Irungu Wainaina ayaa waxa siyaabo kala duwan looga afduubtay waqooyiga iyo koonfurta magaalada Wajeer.
Ma jiraan faahfaahino dheeraad ah oo ku aadan waqtiga la sii daayay, qaabka loo sii daayey iyo goobta rasmiga ah ee lagu heystay, iyadoo Al-Shabaab ay horey sii deynta saraakiishan ugu xirtay shuruudo dhowr ah oo ay ku jireen in ciidamada Kenya ka baxaan Somalia, in la sii daayo maxaabiis Al-Shabaab uga xirxiran Kenya iyo qaar hase ahaatee Kenya ayaa ku gacan seyrtay shuruudahaas.
War ku saabsan arintan oo ka soo baxay saraakiisha Al-Shabaab lama hayo illaa hadda, iyadoo labada sarkaal ee la sii daayeyna ay gaareen degmada Wajeer ee gobolka woqooyi Bari Kenya sida ay sheegeyso AFP.
Dhinaca kale, waxa soconaya wada xaajood kale oo Al-Shabaab looga dhaadhicinayo sii daynta saraakiil kale oo Kenyaan ah oo gacanta ugu jira weli.
Xarakada Al-Shabaab ayaa horey ugu toogatay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe dhowr ka mid ah saraakiil Kenyan ah oo ay soo afduubteen, ka dib markii uu dhamaaday waqti ay u qabteen dowlada Kenya iney ku fuliso shuruudo ay soo bandhigtay.
Dowlada Soomaaliya oo Heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka Holand (Aqri Nuxurka Heshiiskaasi)
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa heshiis la saxiixatay shirkad ilaalisa xeebaha oo lagu magacaabo The Atlantic Marine and Offshore Group Taasi oo fadhigeedu yahay dalka Holland, waxaana heshiiskaasi ugu muhiimsan dib u dhiska iyo qalabeynta Ciidammada Badda Soomaaliya
Warada qoraalka ah oo muujinaysa heshiiska ay wada gaareen dowlada Soomaaliya iyo shirkadan fadhigeedu yahay wadanka Holan ayaa wax yaabaha ugu horeya ee ka muuqda waxaa ka mid ah muhimadda ay leedahay aas’aaska nidaam sahlaya ilaalinta xeebaha Soomaaliua taasi oo ahmiyad u ah inla helo sharci lagu xakamaynayo dhibaatooyinka ka taagan biyaha Soomaaliua, iyo horumarka ilaha dhaqaalaha.
Heshiiskani ayaa u horseedaya Soomaliya xasilooni iyo dib u soo kabashada ilaha dhaqaale ee dalka, waxaana uu taageeraya ayaa lagu yiri warka qoraalka ah Lixda tiir ee siyaasadda Soomaaliya.
Waxyaabaha gundhigga a u ah ama ugu muhiimsan heshiiskan oo looga gol leeyahay dhismaha shaxda ilaalinta xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah
1-In lala socdo ilaha dhaqaale ee gaarka ah.
2- in lagu gaaf wareego lana kontroolo ama la ilaaliyo si loo suga ilaha dhaqaale .
3- la socodka dhaq dhaqaaqa ganacsi iyo dekedaha.
4- Difaaca qeyraadka dabiiciga ah.
5- difaaca kaluumaysiga sharcidarrada ah ee Maraakiibta ajaanibta ah iyo waxyaabaha saldhiga u ah.
6- ka hortaga sunta lagu daadinayo xeebaha Soomaaliya oo khatar ku ah dadka iyo kheyraadka dibiiciga ah.
7-In la sameeyo dabagallo ku aadan badbaadada iyo ka hortagga adeegyada kotorbaannada ah.
Shirkada ayaa intabadan waxaa ay ka shaqeysaa horumarinta nidaamyada caalamiga ah ee la xiriira dhinaca marin biyoodyada, ayagoo isticmaalaya qalab dooman iyo maraakiib dheereeya oo xeebaha ka howlgala waxaana la sheegey in ay joogteyn doonaan howlgallada si loo adkeeyo amaanka xeebaha.
Waxaa ay sidoo kale taageerayaan hay’adaha amaanka ee xeebaha Soomaaliya qaabilsan, ayagoo ka saacidaya barnaamijyo tababar iyo in xirfadahooda sare loo qaado, saraakiisha iyo ciidamada ilaalada xeebaha.
Ugu dambeyntii waxaa la sheegey shirkadani in ay ku howlgali karto oo kaliya awaamir ama fasax ay ka haysato dowlada federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana ka marneeyn in lagu howlgalo nidaamka caalamiga ah oo ay dejisay Qaramada Midoobay.
Daawo Sawirada Suuqa Bakaaraha oo lagu kala cararay iyo iska hor imaad dhaxmaray rag Shabaab katirsan iyo Ciidanka Dowlada
Suuqa Weyn ee Bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaan Sarta Xaaji Cali Dheere ayaa mar qura lagu kala cararay kadib markii halkaasi iska hor imaad ku dhax maray rag katirsan Al-Shabaab iyo Ciidamo dowlada katirsan oo halkaasi kusugnaa.
Rag Biskoolado ku hubeesan oo Shabaab katirsan ayaa rasaas la dhacay Askari katirsan Ciidanka Dowlada iyadoona markaasi kadib ay bilaabatay rasaas dhax martay askar kale oo katirsan Ciidanka Dowlada iyo raga Shabaab katirsan ee askariga xabada ku dhuftay iyadoona israsaaseynta ay socotay Daqiiqado kooban.
inta la xaqijiiyay waxaa israsaaseynta ku Dhintay Haweeney Suuqa ka adeeganeysay waxaa sidoo kale ku dhaawcamay askari katirsan Ciidanka Dowlada iyo qof kale oo Shacab ah waxaana durba Suuqa xiligaasi kadib ka bilowday kala carar baahsan .
Goobta israsaaseynta ka dhacday oo aheed goob aad u mashquul badan ayaa mar qura la arkay iyada oo cidlo ah ganacsatadii iyo dadkii kale ee Suuqa ku sugnaana ay goobtaasi ka kala carareen.
Ciidamo katirsan Dowlada oo goobta soo buux dhaafiyay ayaa in cabaar ah rasaas kor u ridiyay iyagoona dadka ka kala eryay goobta ay rasaastu ka dhacday , waxaana suurto gal ah in ay sii kordhaan Qasaaraha ka dhashay iska hor imaadka Suuqa ka dhacay.
Dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhaca Suuqa Bakaaraha ayaa sii kordhay tan iyo markii Bisha Barakeesan la guda galay iyadoona Suuqa Bakaarah xiligan uu yahay mid saxmad badan oo dadku dukaameesi iyo iibsashada dharka ciida u yimaadaa.
Shacabka magaalada Muqdisho oo Habaar iyo Naceeyb cusub bilaabay , Waa maxay Habaarka (Akkri Warbixin) !!
Goobaha lagu caweeyo dadkuna iskugu yimaadaan ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka aloosan buuq fara badan oo waliba xambaarsan naceeyb iyo fikrado meel dheer taabanaya.
Hadal heeynta ugu badan goobaha fadhi ku dirirka magaalada Muqdisho ayaa noqotay cajal cod ah oo uu soo diray amiirka xarakada Al Shabaab Axmed Cabdi Godane kaas oo sheegay in uu sii socon doono Jihaadka ay ku jiraan Maleeshiyaadka kooxdiisa.
"Axmed Godane Allaha naga qabto Jihaadka uu Muqdisho iyo nawaaxigeeda la jeclaaday ee gobaladiisa aanan u qalmin waan garan weeynay balse Jihaadkiisa wuxuu markaan ku soo aruuray inuu laayo Turkida Muslimiinta ah ee Shacabka Somaaliyeed gar gaareeysa : Sidaas waxaa yiri Macalin Cusmaan Nuur Dayib oo ka mid ah macalimiinta dugsiyada Quraanka magaalada Muqdisho wax ku barta caruurta ".
Hooyo Dahabo Xaashi Cadaawe oo goob lagu shaaxo ku leh magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Baar Ubax ayaa waxa ay tiri sidatan " Axmed Godane waa Masiibo iyo imtixaan na loo soo diray wuxuuna ka inkaarsaday Hooyooyin fara badan oo uu Caruurtooda ka haligay balse maalin maalmaha ka mid ah ayuu inkaarta Hooyooyinka Soomaaliyeed god u gali doonaa "
Inta badan Shacabka magaalada Muqdisho ayaa naceeyb aad u daran waxa ay u qaadeen kooxda Al Shabaab oo maalmahaan dambe biloowday inay qaarajiyaan Samafalaayasha Turkiga ah oo magaalada Muqdisho aad u dhisay iyo Hay´adaha gar gaarka oo iyagana caasimada xafiisyo cusub ka furtay.
Shaqaale Ajaanib ee dalka imaratka carabta soo wajahday hurdo xumo baaxad weyn ka dib markii laga hor istaagay marwaxad!!(Daawo Muuqaal+Warbixin
Qaar ka mid ah shaqaalaha aajinabiyiinta ah ee ka xoogsada dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahday hurdo xumo baaxad weyn ka dib markii laga hor istaagay inay helaan marwaxadii qaboojin lahayd qolalka ay jiiftaan xilli uu heer kulka dalkaas maraayo wax ka badan ilaa iyo 50 degrii oo centigrade.
Shaqaalaahaan ka xoogsada dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaana magaalada Dubai ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahday hurdo la'aan uu sababay kuleyl xad dhaaf oo ka jira dalkaas xilli shaqaalahaas loo diiday inay helaan marwaxada la isku qaboojiyo taas oo keentay inuu heer kulka qolkoodu uu gaaro ilaa iyo 33 degrii oo centigrade arintaas oo ah mid aad iyo aad qatar u ah oo aanan lagu seexan karin, Shaqaalahaan oo mudo bilooyin ahba ay heysatay dhibaatadaas ayaa inkastoo ay cabashooyin badan ka muujiyeen arintaas aysan jirin cid ka hoos qaaday
Ugu dambeyntiina iyadoo ay arintaan ka mid thay naxariis darada iyo kibirka ay dadka carbeed kula dhaqmaan dadka aajaniyinnta ah ayaa shaqaalahaas oo badankooda ku shaqeeya maalintii cadceed ama qurax uu kuleylkeedu yahay in ka badan ilaa iyo 50 ŗC) degree Celsius ayaa hadana waxaa habeenkii ugu darsamay kuleykaas aysan ka seexan karin, Qaar ka mid ah xoogsatadaas ayaa doorbida inay seexdaan xarunta cuntada lagu cuno halka ay kuwo kalena ay is rusheeyaan si ay isu qaboojiyaan, Carabta Milkiilayaasha ah ayaan u muuqan kuwo dan ka leh shaqaalahaas dhibaateysan iyadoona aysan waxba ka qaban dhibka heystay xoogasatadaas oo soo jirey waqti dheer.
Khilaaf ka dhex dhashay Xassan Sheikh,Shirdoon iyo Prof Jawaari. (Waa maxay Sababtu Warbixin).
Illo wareedyo ka tirsan Xukuumadda Somalia, ayaa waxa ay Shabakadda Allbanaadir u xaqiijisay in Khilaaf xoogan uu ka dhex curtay Mas’uuliyiinta ugu sareysa Madaxweyne Xassan Sheikh, Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof Jawaari iyo Rw. Shirdoon, Khilaafkaasi oo ka dhashay qaabka leysugu Shandheeyay Golaha Wasiiradda ee la filaayo in dhawaan lagu dhawaaqo.
Liiska isku shaandheynta oo iminka loo gudbiyay Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan Sheikh Maxamuud, ayaa waxaa is hortaagay Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof Jawaari ka gadaal markii uu Liiskaasi ku dhex arkay isdabamarin lagu sameeyay Beelo badan.
Madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha iyo Guddoomiyaha Baarlamanka, ayaa midba doonaya in shaqsiyaad ay wataan laga soo buuxiyo Liiska Xukuumadda Cusub ee dhawaan lagu dhawaaqayo, isagoona mid waliba xooga saarayo in Liiskaasi lagu dhex arko Mas’uuliyiin uu si gaar ah u wato.
Seddaxda Mas’uul, ayaa waxa ay ku loolamayaan inay soo bandhigaan Golo u badan Rabitaankooda si ay uga dhex muuqdaan golaha cusub, waxaana taasi ay keentay in tirada golaha oo la doonayey in markii hore laga dhigo 18 iminka la go’aamiyey 25.
Liiska oo ay wada aqriyeen Saddexda Mas’uul, ayaa waxaa lagu dhex arkay in kabadan 11-Wasiir oo ku jira Xarakadda Ikhwaan Muslimiin gaar ahaan Dam Jadiid, iyadoona ay wararku sheegayaan in Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud uu 11-kaasi Wasiir usoo xulay Beel ahaan balse ay kasoo wada jeedaan Dam Jadiid fakir ahaan.
Dhanka kale, Raa’isul Wasaare Saacid ayaa isna doonaya in shaqsiyaad uu wato loo magacaabo Wasaaradaha maaliyadda, Gaashaandhigga iyo Gudaha, halka Jawaarina uu ku dheggan yahay Maaliyadda iyo Qorsheynta, Waxbarashada iyo iskaashiga caalamiga ah.
Khilaafka Saddexda Mas’uul, ayaa waxa uu dhaliyay in dib u dhac uu ku imaado ku dhawaaqida Xukuumadda Cusub, iyadoona ay socdaan kulamo aan dhamaad laheyn oo u dhexeeya Saddexda Mas’uul oo isku heysta Wasiiradda ugu muhiimsan.
Ugu dambeyntii, Liiska ay ku qoran yihiin Magacyada Xukuumadda Cusub, ayaa waxa uu iminka yaalla Xafiiska Madaxweyne Xassan Sheikh, waxaana la filayaa inuu kasoo tanaasulo tiro Wasiiro muhiim u ahaa Xassan Sheikh.
Dowlad aan horay looga baran in ay ka hadasho dhibaatooyinka Muqdisho ayaa ka hadashay Weerarkii Dhawaan Lagu Qaaday Dhismaha Ay Daganayeen Shaqaalaha Safaarada Turkiga Ee Muqdisho.
Dowladda Koonfur Afrika ayaa si weyn u cambareysay weerarkii dhawaan lagu qaadey dhismo ay daganaayeen Shaqaalaha Safaaradda Dowladda Turkiga ku leedahay Magalada Muqdisho,kaasoo sababey dhimasho iyo dhaawac uu ku jiro Sarkaal ka tirsanaa ilaalada Safaaradda.
War qoraal ah oo ay soo saartay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Dowladda Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay in ay aad u soo dhaweynayso tallabadda ay Dowladda Turkiga qaadey ay ku taageereyso Soomaaliya ee ugu horeysay sanadkii 2011,kii markii uu gaarey R/Wasaare Erdogan magalada Muqdisho iyo familkisa taasoo wixii ka dambeyay ay Soomaaliya noqotay meel ay Ururada Caalamiga ku qulqulaan oo ay ku jirto Koonfur Afrika.
Sidoo kale South Africa waxey soo dhaweynaysaa ayaa lagu yiri qoraalkaas,in Turkiga ay howlaha ay ka waddo Soomaaliya u joojin doonin isku dayada weeararada ay soo qaadayaan argagixisada,ayna sii wadi doonaan taageeradda ay siinayaan Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii Dowladda Koonfur Afrika ayaa tacsi u dirtay Dowladaha iyo Shacabka Soomaaliya iyo Turkiga dadkii kaga geeriyooday weerarkii dhacey 27 kii bishan, waxaana ka go,an sii waddida taageeradda ay siinayso Dowladda Soomaaliya iyo ka qeyb qaadashada.nabaddeynta iyo horumarka dalka Soomaaliya,waxeyna ugu baaqeysa dhamaan kooxaha Soomaaliada iyo shakhsiyaadka qurba joogta ah inay ka qeyb qaataan soo celinta kala dambeynta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Wasaarada Difaaca oo gashaanka u daruurtay eedeyn uu dusha uga tuuray wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Kariim Guuleed.
Wasaarada difaaca Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay been abuur ku tilmaamtay in sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed uu ka qeyb qaatay dagaalkii gobalka Sh/hoose xilli wasiirka arimaha guduhu uu maalmo ka hor baarlamaanka ka hor sheegay in sarkaal ciidan uu ahaa xudunta dagaalkaasi.
Wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdi Xakiim Xaaji (Fiqi) oo markiisa maanta isna baarlamaanka hor tegay su’aalna laga weydiiyay arinta la xariirta dagaalkii Sh/hoose ayaa jawaabta su’aashaasi waxa uu u daayay oo markii horaba la socday taliyaha gaaska labad ee ciidanka qalabka sida, Cabdullahi Cagey, kaas oo sheegay in ragii dagaalkaasi ka danbeeyay ay ahaayeen maleshiyaad aan ka amar qaadan ciidanka dowlada aanna lagu tilmaami Karin ciidan qaran.
“Waxa ay ahaayeen maleeshiyaad ragii huriyay dagaalkaasi. Shaqo kuma laheyn ciidanka dowlada, waxaana cadeyneynaa in eedeymahaasi ay been abuur ahaayeen”, Cagey ayaa hoolka Baarlamaanka ka sheegay hadalkaasi.
Iska gedinta eedeymaha uga imaanayay wasaarada arimaha gudaha ayaa imaaneysa maalin uun kadib markii Cabdi Kariim Xuseen Guuleed, Wasiirka arimaha gudaha Soomaaliya, uu baarlamaanka Soomaaliya u sheegay in wasaarada gaashaan-dhiggu ay laheyd qaladka dagaalkii Sh/hoose maadaama sarkaal horay dhibaato gobalka uga geestay oo la doonayay in bedel lagu sameeyo ay ku dhex hayeen gobalka uuna abaabulay dagalkii lagu hoobtay.
Si kastaba, labada wasaaradood ee arimaga gudaha iyo difaaca oo ay heestaan laba nin oo aad isugu dhaw fikir ahaan marka la eego golaha wasiirada intooda kale ayaa waxaa dad badan is-weydiinayaan sababaha ay baarlamaanka hortiisa isugu jawaabayaan.
Barnaamij ka baxa telefishin kii ugu yaabka badnaa abid oo lagu soo bandhigay tartan dad badan Ka Yaabiyay!!(Daawo Muuqaal+Warbiixn)
Barnaamij ka baxa telefish kii ugu yaab badnaa abid ayaa waxaa la sheegay inuu soo bandhigay telefishin ku yaala dalka Pakistaan ka dib markii uu keenay in loo tartamo oo lagu guuleysto caruur yar yar.
Barnaamijka lagu magacaabo Amaan Ramazaan oo ah barnaamij loogu talagalay bisha barakaysan ee ramadaanka kana baxa telefishinka lagu magacaabo Tv Geo ee dalkaas Pakistaan ayaa waxaa la sheegay inuu soo bandhigay tartan ay lamaanayaasha is qaba ee aan caruurta dhalin ugu tartamayaan sidii ay ugu guuleysan laahaayeen ilmo ay korsadaan, Ilmaha loo tartamaayo oo ah kuwa la dayac ama iska tuureen dadkii dhalay ayaa lamaanayaashaas tartamaya ay ku guulasanayaan, Ninka daadihiya barnaamijkaas oo lagu magacaabo Aamir Liaquat Hussain ayaa waxaa uu sheegay in fadliga bisha barakaysan uu ka farxinaayo lamaane is qaba oo aan wax caruur ah isku dhalin iyadoona lamaanayaashaas su'aalo iyo waxyaabo kale oo la weydiinaayo ka dib ay ku guulaysan doonaan ilmahaas ay korsanayaan, Ninkaan ayaa waxaa uu barnaamijikiisii ugu dambeeyey uu ku soo bandhigay gabar yar oo dhowr bilood jirta oo loo tartamaamyo taas oo uuna ugu dambeyntii ay ku guuleysteen nin lagu magacaabo Riaz-ud-din iyo xaaskiisa kuwaas oo ku tilmaamay hadiyad uu ilaahay ugu deeqay bisha Ramadaan.
Ugu dambeyntiina iyadoo barnaamijkaas ay dad badan oo ka mid ah dalalka aduunka iyo waliba dalka Pakistan ay ku tilmaamneen wax laga naxo islamarkaana aan la aqbali karin in caruur loo tartamo ayaa waxaa arintaas gaashaanka ku dhuftay heyadaha qaabilsan caruurtaas la dayaco ama la iska fogeeyo marka ay dhashaan kuwaas oo sheegay inay si aad iyo aad ah ay ugu baahan yihiin dad kala wareego oo korsado caruurtaas, Qoyska ku guuleystay gabadhaas yar ayaa waxay is qabeen mudo ilaa iyo 14 sano ah iyadoona aysan wax caruur ah aysan isu dhallin ilaa iyo waqtigaas iyagoona sheegay inay dhib ku qabeen waligoo su'aasha ah wax uur ah ma leedahay xaasku.
Qunsulka Safaaradda Soomaalida ee Kenya oo Muqallas ka noqday Saxafiyiinta soo barakacday (Document Cadayn ah)
Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee Kenya ku leedahay, Siyaad Maxamuud Shire ayaa billaabay in uu qaab muqallasnimo ah uga dhex shaqeeyo saxafiyiinta qurba joogta ah ee Kenya ku nool.
Qunsulka oo dhawaan xilkan loo magacaabay ayaa billaabay in uu u sameeyo qaar ka tirsan saxfiyiinta Nairobi ku nool warqado Safaaradda Soomaalida ku saxiixan tahay, si ay hey’adaha wax uga helaan.
Warqad caddeyn ah oo uu ka saxiixan yahay qunsulka oo la helay ayaa muujineysa, in Qunsul Siyaad uu Warqad u qoray urur lagu sheegay in ay ku mideysan yihiin saxafiyiinta Khaatumo State kazoo jeedda ee ku nool Kenya.
Warqadda ayaa muujineysa in safaaradda ay aqoonsan tahay ururkaas, isla markaana loo baahan yahay in si deg deg ah loo caawiyo.
Siyaad Maxamuud Shire oo horey gacan-yaere ugu ahaan jiray Cali Maxamed geeddi xilligii uu ahaa reysal wasaaraha Soomaaliya, ayaa dhalasho ahaan kasoo jeeda dhulka Khaatumo State ee gobollada Sool iyo Sanaag.
Arintaan oo aan la ogeyn in uu wax ka ogyahay Safiirka Soomaaliya ee Kenya, Maxamed Cali Nuur (Ameeriko), ayaa ka yaabisay saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool Kenya gaar ahaan kuwa kasoo cararay goobaha ay dagaallada ka jiraan.
Qaar ka tirsan saxafiyiinta ayaa ku tilmaamay in warqaddan uun lagu ogaaday in uu jiro urur saxafiyiin reer khaatumo ah balse aysan iyaga horey u maqlin xataa ururkaas.
Lama garan karo sababta ku kalliftay qunsulka in uu sameeyo dallaalnimadan iyo sidoo kale in uu lacago ku qaatay iyo in kale.
Kenya ayaa waxaa ku nool saxafiyiin badan oo qaar kood shaqeeya iyo kuwa shaqo la’aan ah. Waxey isugu jiraan kuwa kasoo cararay gudaha Soomaaliya haba u badnaato magaalada Muqdisho iyo kuwa gudaha Kenya wax ku bartay.
Saxafiyiintan oo boqol gaaraya, ayaa ah kuwa si guud iyo si gaar ah isku khilaafsan, mana jirto hal urur ama dallad oo ay ku mideysan yihiin.
Halkaan Hoose ka arag warqadda uu Qunsul Siyaad u qoray Saxafiyiinta sheegtay Khaatumo State
Muqdisho oo markii ugu horeysay Muddo ay ka howlgalayaan taksiyo ku shaqeeya hab iyo qalab casri ah(Daawo Muuqaal+warbixin)
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegasy in markii ugu horeysay ay ka howlgalayaan taksiyo ku shaqeeya hab iyo qalab casri ah oo aan horey loogu arkin magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa mudo sanooyin ah ka dib waxaa la sheegay inay markii ugu horeysay ay ka howgalayaan tagaasi u shaqeeya hab casri ah oo la mid ah habka ay u shaqeeyaan tagaasida aduunka, Shirkado cusub Taxi oo u ku shaqeysa hab iyo qalab casri ah ayaa waxaa dhawaantaan ay ka howlgaleen wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoona ay arintaas soo dhaweeyeen qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho, Shirkadahaan oo ay maalgaliyeen qurba joog dib ugu noqotey magaalada Muqdisho ayaa waxay maalgaliyayaashaas sheegeen inay arkaan fursad qaali ah oo ka soo muuqato ku shaqeynta tagsiyadaas cusub ee ka shaqeynaaya magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntiina iyadoo shirkadahaan cusub ee dhawaantaan ka howlgalau magaalada Muqdisho ay yihiin kuwo wax weyn ku soo kordhin kara horumarka iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho ayaa sidoo akle waxay shirkadahaas ay shaqo abuuris u yihiin dhaliyaro badan gaar ahaana darawalada ku nool magaalada Muqdisho oo ay shaqo la'aan ay ku haysato magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Somalia oo amray in Shacabka iyo Ciidanka garab istaagaan Walaalaha Turkiga(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay wehliyaan Wasiiradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga iyo Wasiirka Diifaaca ayaa maanta booqday safaaradda Turkiga ee Soomaaliya isagoona gudaha Safaaradda kulan kula qaatay Safiirka Dowladda Turkiga u fadhiya Dalkeena Soomaaliya Kamaludin Kani Torun.
Madaxweynaha ayaa uga tacsiyeyey Shacabka iyo Dowladda Turkiga dhacdadii Kooxda Al- Shabaab ay ka geysatay xarun ay deganaayeen shaqaalaha Safaaradda Turkiga” Allaah ha u naxaristo dadkii ku dhintay kuwa dhaawaca ahna Allah ha caafiyo, Turkiga waxay astaan u yihiin nabadda Soomaaliya, kooxahaan waxay ka soo horjeedaan howlaha kala duwan iyo horumarka walaalaheen Muslimiinta Turkiga ka wadaan dalkeena, sida dhismaha Dugsiyada,Wadooyinka, Isbitaallada casriga ah, iyo howlaha kale” ayuu yiri Madaxweynuhu.
“Ciidamadda Ammaanku iyo shacabka Soomaaliyeedba siwada jira ha u garab-istaagaano walaalaha Turkiga, waad ogtihiin sida dhabta ah oo ay inoo garab-istaageen” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Ugu dambeyntii Safiirka Dowladda Turkiga ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in Dowladda Turkiga ay ka go’an tahay ka shaqeynta gudaha Soomaaliya “ Weerarku waxa uu ahaa mid lagu doonayey in lagu joojiyo howlaha aanu wadno laakin ma joojin doono” ayuu yiri Safiirka Turkiga ee Soomaaliya.
Daawo Sawirada Turkiga oo bilaabay mashuur laami lagu saarayo wado gaareysa 23-Kiiloo Mitir oo Muqdisho marta
Sida uu Afhayeenka maamulka gobalka Banaadir u xaqiijiyay shabakadaan jornalizem waxaa maanta bilaawday mashruuc wada laami ah oo ay dowlada Turkiga ka hir gelineyso magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Wadadaan ay dhismaheeda fulin doonaan Turkiga si loo guda galo mataaneynta caasimadaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa ay noqoneysaa mid ay aad u soo dhaweeyaan Shacabka Soomaaliyeed oo ku jaha warersanaa wadooyinka Bur-bursan ee sabada shilalka badan.
Wadada oo lagu qiyaasay 23-KM ayaa waxaa dhismaheedu kasoo bilaabanayaan garoonka diyaaradaha iyada oo lageyn doono KM0 sida uu Maxamed Yuusuf Cismaan, Afhayeenka maamulka gobalka Banaadir noo xaqiijiyay.
Waa markii ugu horeysay ee gobalaka Banaadir laga hir-geliyo wada laami ah oo si casri ah loo dhisayo tan iyo bur-burkii dalka waxaana arintaani ay muujineysaa astaan dib u so kabasho oo Soomaaliya ay u jaheysatay wixii ka danbeyay sanadkii 2012-ka.
Shariif Xassan oo Meel xun Qoraxda ugu dhacday iyo isaga oo laga diiday inuu ku biiro Gudiga Qaswadayaasha Somalia. (Waa maxay Sababtu).
Shariif Xassan Sheikh Aadan oo kamid ahaa Xukuumadii hore ee KMG, ayaa waxa uu dhexda uga dhex dhacay Guddiga Qaswadayaasha Somalia ee lamagac baxay ‘’Gudiga Badbaadada Qaran Somalia’’.
Shariif Xassan, ayaa waxaa la sheegayaa inuu qaati ka taagan yahay Mas’uuliyiin ka tirsan Guddiga Badbaadinta Qaranka, waxaana lagu soo waramayaan in Gudigaasi ay iska fogeeyen Shariif Xassan kadib markii qaar ka tirsan ay dhaliileen qaabka uu wax u wado Shariif Xassan.
Mas’uul ka tirsan Guddiga, ayaa waxa uu Shabakadda Allbanaadir u xaqiijiyay in Guddiga Badbaadinta Qaranka uu iska ceyriyay Shariif Xassan oo horay usoo Musuq-maasuqay Xukuumaddihii Dalka soo maray, waxa uuna Tilmaamay in Guddiga uusan aqbali Karin Shaqsiyaadka Dalka horay uga soo galay Dhibaatooyin.
Shariif Xassan ayaa waxa uu iminka taagan yahay meel cidla ah, waxa uuna halkaasi ku waayay kamid ahaan shaha Guddiga Badbaadinta Qaranka wallow ay wararku sheegayaan inuu markii hore dhaqaale Xoogan ugu deeqay Guddiga.
Ma cadda halka uu Shariif Xassan caga dhigan doono, waxaana bilowday in Siyaasiyiinta Dalka ay ka fogaadaan Shariif Xassan kadib markii loo aaneeyay inuu qasay Xukuumadihii dalka soo maray.
Yusuf Indha Cadde oo howl ka dhex wata gudaha Magaalladda Muqdisho. (Warbixin Muhiim ah).
Yusuf Siyaad Indha Cadde oo kamid ahaa Hoggaamiya kooxeedyadii Somalia qaska kawaday xilalna ka soo kala qabtay Xukuumadihii KMG ahaa ee Dalka soo maray, ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku howlan yahay Arrimo naxdin galiyay Xukuumadda iyo Shacbiga.
Warar hoose oo aan ka heleyno Mas’uuliyiin ka ag dhow dhow Indha Cadde, ayaa Shabakadda Allbanaadir u xaqiijiyay in Indha Cadde uu ku howlan yahay Arrimo baddan oo ay kamid yihiin dhismaha Ciiddamo ka soo jeeda beeshiisa iyo qorsheynta Dilal uu ka geysto Magaalladda Muqdisho.
Xogta ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeysaa in Yusuf Indha Cadde uu si dadban ula shaqeeyo Kooxda Alshabaab iyadoona ay wararku sheegayaan in la helay Codad badan oo laga duubay Indha Cadde iyo Saraakiil ka tirsan Alshabaab.
Sidoo kale, Yusuf Indha Cadde, ayaa waxaa loo aaneynaaya inuu ka dambeeyay dilal hore uga dhacay Magaalladda Muqdisho, oo bar bar socday Xariga Wadaadka Xagjirka Somalia ee Xassan Dahir Aweys.
Indha Cadde, ayaa waxa uu hadda wadaa Qorshooyin badan oo barakicin kara Jiritaanka Xukuumadda Somalia, taasi oo ay ugu weyn tahay qalqal galinta Ammaanka Magaalladda Muqdisho iyo Madax jabinta Shaqsiyaadka ugu firfircoon Xukuumadda.
QM ayaa waxa ay horay usoo saartay Qoraal muujinaayay in Yusuf Indha Cadde uu leeyahay Ciiddamo u gaar ah isla markaana ay qas ka wadaan gudaha Magaalladda Muqdisho iyo daafaheeda, iyadoona qoraalka QM lagu sheegay in Yusuf Indha Cadde uu kamid yahay Qaswadayaasha Somalia.